Abavelisi beeMveliso - ababoneleli beeMveliso zaseTshayina kunye neFactory
Izibane ezingagqabhukiyo kunye nezibane
Izibane ze-LED ezingenaziqhushumbisi
Izibane ezingxamisekileyo ezingenakuqhambuka
Izibane zefluorescent ezingaqhumiyo
Izibane ezihambayo ezingaqhushumbayo
Ezinye izibane ezingaqhushumba
Izixhobo zombane ezingaqhushumba
Ibhokisi yoSasazo engenakuqhushumba
Ukusebenza kobungqina bokuqhuma, ibhokisi yokulawula
ISaphuli seSekethe esingenaziqhushumbisi
Isiqalisi sobungqina bokudubula
Ibhokisi yoQhagamshelwano enobungqina bokudubula
Imibhobho yokuthintela ukuqhuma
Yonke iplastiki-ubungqina bokudubula
IziXhobo zoMbane ezingaqhushumbayo kunye nezingaboliyo
Ugqabhuko&nokonakala Iplagi&socket isixhobo
Abalandeli bobungqina bokudubula
Ii-Air Conditioners ezingaqhushumba
Amanzi nothuli&izixhobo zombane ezingaginyekiyo
Umlilo we-FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B ...
SFCX uthotho Uthuli lwamanzi&ibhokisi yobungqina bomhlwa
1. Iindawo ezinemvula eninzi, ukufuma kunye nesitshizi esinzima setyuwa.
2. Indawo yokusebenza ifumile kwaye kukho indawo yomphunga wamanzi.
3. Umphakamo awudluli kwi-2000m.
4. Indawo yokusebenza iqulethe uthuli olungatshayo olufana nesanti nothuli.
5. Indawo yokusebenza iqulethe iigesi ezitshabalalisayo ezifana ne-acids ebuthakathaka kunye neziseko ezibuthathaka.
6. Isebenza kwi-petroleum, ikhemikhali, ukutya, amayeza, umkhosi, indawo yokugcina impahla kunye nezinye iindawo.
7. Ikakhulu isetyenziselwa ukuhanjiswa kwamandla kwimisebenzi yethutyana okanye ephathwayo.
SFK-g series Uthuli lwamanzi&ibhokisi yokulawula ubungqina bomhlwa (intsimbi evalekileyo ebiyelweyo)
7. Sebenzisa isixhobo sombane we-electromagnetic ukude okanye ngokungathanga ngqo lawula injini kwindawo yemoto elawulwayo, kwaye ujonge ukusebenza kwesekethe elawulwayo ngesixhobo sombane kunye nokukhanya komqondiso.
SFK-L series Amanzi & nothuli ibhokisi yokulawula ubungqina
SFJX-S series Uthuli lwamanzi&ibhodi yokuhlangana yobungqina bomhlwa (iplastiki epheleleyo ebiyelweyo)
7. Uqhagamshelwano lokukhanyisa, amandla, ulawulo kunye nemigca yonxibelelwano.
SFJX-L series Amanzi uthuli ibhodi yokudibana
SFZ-g uthotho Amanzi & uthuli & umhlwa-ubungqina post post (estainless steel ebiyelweyo)
Uthotho lwe-SFZ-S Uthuli lwamanzi&isithuba sokusebenza esingqina ukubola (indawo ebiyelweyo yeplastiki epheleleyo)
LNZ uthotho Amanzi & nothuli umsebenzi isithuba umsebenzi
SFDZ series Uthuli lwamanzi & umhlwa proof sekhebula sesekethe
7. Ins and outs the circuit infrequently, kwaye ikhusela i-controlled circuit kwi-overload kunye ne-short circuit.
BDM series Explosion-proof cable clamping etywiniweyo isinxibelelanisi
1. Isetyenziswa ngokubanzi kwindawo yegesi enokutsha kunye neqhumayo njengokusetyenziswa kwe-oyile, ukucokiswa, ishishini lemichiza, iqonga leoli elingaphesheya, i-oil tanker, njl. ukusetyenzwa
2. Isebenza kuZowuni 1 kunye neZowuni 2 yemekobume yerhasi eqhumayo;
3. Isebenza kwi-IIA, IIB, IIC yendawo yerhasi eqhumayo;
4. Isebenza kwimimandla ye-21 kunye ne-22 yendawo yothuli oluvuthayo;
5. Iintambo zokusetyenziswa kwizixhobo zombane ezingagqabhukiyo kwiindawo ezinobungozi zepetroleum neenkampani zeekhemikhali Ziziswe ukuba zisetyenziswe.
MBG uthotho Uqhushumbo-ubungqina bokwahlula isiqhagamshelanisi esitywiniweyo
1. Isetyenziswe ngokubanzi kwindawo yegesi enokutsha kunye ne-explosive, efana ne-oil extraction, ukucocwa kwe-oyile, i-industrial industry, i-platform yeoli ye-offshore, i-oil tanker kunye nezinye iindawo ezinothuli ezinokutsha ezifana ne-industry yezempi, i-port, i-grain storage kunye ne-metal processing.
2. Ifanele indawo yerhasi eqhumayo kwindawo 1, indawo yesi-2;
3. Umoya oqhumayo: iklasi ⅡA,ⅡB, ⅡC;
4. Ifanele indawo yothuli oluvuthayo kwindawo ye-22, 21;
5. Ifanelekile kwiimfuno eziphezulu zokukhusela, iindawo ezimanzi.
BHC series Explosion-proof wiring box
1. Isetyenziswa kakhulu ekutsalweni kwe-oyile, ukucokiswa kwe-oyile, ukucokiswa kwe-oyile, iikhemikhali, amaqonga e-oyile angaphesheya kolwandle, iinqwelo ze-oyile kunye nezinye igesi ezinokutsha neziqhumayo, Ikwasetyenziselwa umkhosi, amazibuko, ukugcinwa kokutya, ukusetyenzwa kwesinyithi kunye nezinye iziza zothuli olunokutsha;